Tsinkafona, Manimba ny Farihy Midadasika Indrindra Ao Etiopia no Sady Loza Mitatao Ho An’ny Asa Fivelomana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2017 5:31 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, አማርኛ, Español, Français, 日本語, Italiano, English
Ny Fivoahana amin'ny renirano Manga an'i Nile. Sary an'i Richard Mortel avy amin'ny Flickr. CC BY 2.0
Nanomboka tamin'ny taona 2012, nisy firohotanà ahidratsy fantatra amin'ny anarana hoe tsinkafona mitsitokotoko an-tapitrisany eny amin'ny fanambonin'ny Farihin'i Tana, ary hatramin'ireo honahonana sy faritra mando manodidina ny farihy.
Efa ho Etiopianina roa tapitrisa no miankina mivantana amin'ilay farihy sy ireo faritra mando sy fiompiana mifanaraka amin'izany mba ho antom-pivelomany, araka ny voalazan'ny Nature And Biodiversity Conservation Union (NABU), fikambanana Alemà iray tsy miankina mifantoka amin'ny fampandrosoana maharitra sy fiarovana ny faritra. Nitondra voka-dratsy ny fitombon'ny tsinkafona, indrindra any amin'ny ilany andrefan'ny farihy, faritra iray onenan'ireo mpanjono, mpamboly, ary mpiompy izay miankina amin'io ny asan-dry zareo
Ilay ranobe, 832 kilaometatra toradroa no farihy lehibe indrindra ao Etiopia, sady feno endrika tontolo iainana mahasarika, ara-koltoraly sy ara-tantara. Miorina ao anatin'ireo lembalemban'ny faritra faharoa lehibe indrindra ao Etiopia, fari-piadidiana Amhara.
Ara-tontolo iainana, mampiantrano ireo karazam-borona tsy fahita firy sy tandindonim-paharingànana toy ny vorombola manana tandroka mainty ary koa ireo vorona mpifindrafindra toerana ny Farihy Tana.
Ny Farihy Tana dia voamarika ihany koa amin'ny maha loharano nipoiran'i Blue Nile azy, izay mikoriana miankandrefana, alohan'ny fihaonany amin'i Nil fotsy ao Khartoum, renivohitr'i Sodàna.
Nile Manga sy Fotsy no roa manome ny renirano lava indrindra eto ambonin'ny tany, ny Nile. Eny andalana eny, ampian'ireo riandrano kely marobe i Nile alohan'ny hikorianany mianavaratra any Ejipta, saingy avy amin'ny Nile anga no ahazoan'ny Nle ny 80 isanjatn'ny rano ao aminy. Mba hanamarihana ny lhakanton'ny farihy Tana, nilaza i Pasquale Scaturro, mpivezivey fanta-daza sady mpahay fizika malaza, fa: “Fanomezana avy amin'ny farihy Tana ny harenan'i Ejipta”.
Ankehitriny, tena marika iray hafa mihitsy ny farihy – mariky ny toedraharaha mahakivy mikasika ireo harena voajanahary ao Etiopia amin'ny fotoana izay ilàna zavatra bebe kokoa ho an'ny vahoaka haingam-pitomboana ao amin'ny firenena.
Raha vao tsikaritra ny fisian'io voalohany tamin'ny taona 2012, nandrakotra voalohany ny faritra efa ho 100 kilometatra toradroa tamina faritra tsy dia lalina loatra sy ireo morony manodidina ny sisiny andrefana ireo voninkazo nitsimoka. Hatramin'io, haingana be ny fitombony, nihanaka haingana be nandrakotra ny fanambonin'ny farihy. Vokatr'izay, niha-nihena ny velaran'ny ranon'ny farihy any amin'ny faritany andrefana ao Dembiya, hoy ireo mponina nitafa tamin'ny mediam-panjakana.
Araka ny voalazan'ireo manampahaizana izay niresaka tamin'ny mediam-panjakana, nitombo manakaiky ny 100 isanjato ny tsinkafona hatramin'ny taona 2012, amina velarana 200 kilometatra toradroa, na teo aza ny fotoanan'ny ririnina makiana nampihena ny fitombony tamin'ny taona 2016.
Vokatry ny asan'olombelona manodidina ny Farihin'i Tana ny fihanak'ireo karazana zavamaniry ireo. Araka ny voalazan'ny lahatsoratra iray nosoratan'ireo akademisiana anankiroa, vokatry ny fisian'ireo rano maloto avy ao andrenivohitra sy ny fambolena ary ireo fako indostrialy no mahatonga ny firoboroboan'ireo ahidratsy haingana, izay manambana ihany koa ireo Farihy hafa ao Etiopia toa ny Farihy Hawasa sy ny Farihy Zeway.
Nanomboka ny taona 2015, neken'ny UNESCO ho toy ny toerana mirakitra ny Harena Erantany ny Farihy Tana noho ny tahiry ara-tontolo iainana tsy manam-paharoa ao aminy, izany dia vokatr'ireo ezaka nataon'ny NABU mba hiantohana io sata io ho ampahany amin'ny fitehirizana ireo ezaka ataony ao amin'ny faritra. Neken'ny UNESCO ihany koa ny harena ara-tantara, kolontsaina sy ara-pinoana ao amin'ireo nosy, misy fifamatorana akaiky amin'ny Fiangonana Ortodoksa Kopta Etiopiana.
Mitahiry ireo monastera sy ireo fiangonana manan-tantara ihany koa ny farihy. Nanampy azy ireo tamin'ny fiarovana azy ireo, ny fitokana-monin'izy ireo somary voalanjalanja, saingy, noho ireo tsikafona manambana ny hanentsina ny farihy manontolo, voafofo ny fiainan'izy ireo sy ny fahaveloman'ireo rehetra izay monina manakaiky sy miankina tanteraka amin'ny farihy Tana ho sahala amin'ny tahiry natoraly.